October 18, 2019 - Myitter
ပြင်ဦးလွှင်ကိုရောက်ရင် ဒီလိုဆိုင်မျိုးကို သတိထား
October 18, 2019 Myitter 0
ပြင်ဦးလွင်ရောက်ရင် သတိထားနိူင်အောင်…. ဒီနေ့ည ပြင်ဦးလွင်ရောက်တော့ ညစား စားဖို့ ဆိုင်သွားကြတယ်..။ ဝင်ဝင်ချင်း တော်တော်သဘောကျသွားတယ်ဗျ..။ အပြင်အဆင်လေးက တော်တော်လေးကို ကောင်းပါတယ်.. ဝင်ဝင်ချင်း အကင်တွေ တွေ့တော့ ရွေးကြတယ်ဗျ.. ဆိတ်သားတစ်ပွဲ.စယူတော့. ဈေးမေးဖြစ်လိုက်တယ်.. ပွဲသေး ၅၀၀၀ ပွဲကြီး၁သောင်း တဲ့ . ပွဲသေးတစ်ပွဲမှာလိုက်တယ် တခြားဟာတွေတော့ […]
လူ​သေ​ပေမယ့်​…နာမည်​မ​သေတဲ့ လူမသိသူမသိ သူရဲကောင်းလေး ဗိုလ်​ကြီး ပြည့်​ဖြိုးစံ
လူ​သေ​ပေမယ့်​…နာမည်​မ​သေတဲ့ လူမသိသူမသိ သူရဲကောင်းလေး ဗိုလ်​ကြီး ပြည့်​ဖြိုးစံ.. DSA 50 က ဗိုလ်​ကြီး ပြည့်​ဖြိုးစံ… ခလရ ၂၈၆ က အရာရှိ​လေး ဗိုလ်​စံ အသက်​ထက်​ တပ်​ကိုပိုချစ်​တဲ့ ဗိုလ်​စံ သာလွန်အင်အားနဲ့ ​သောင်းကျန်း​သူတွေကို ရင်ဆိုင်​ တိုက်ခိုက်​ရင်း ရဲ​မေ​တွေ စစ်​သည်​​တွေကို ရ​အောင်​ကယ်​ထုတ်​ရာက […]
” ယနေ့တိုင် ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်တဲ့ ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုစဉ်က ဗိုလ်ချုပ်စီးခဲ့သော ချက်ပလက်ကားကြီး”
ရှမ်းပြည်နယ် လွိုင်လင်မြို့ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် သီတာလမ်း ရှိ ဂေါ်ရခါး လူမျိုး ဒေါ်မီး နား အိမ် တွင် ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင် သော အဖွဲ့အား လွိုင်လင်မြို့မှ ပင်လုံမြို့သို့ လိုက်လံ ပို့ဆောင် ပေးသော ချက်ပလက်ကားကို ယနေ့တိုင် အမှတ်တရအဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားဆဲ […]
အိမ်ရှင် အီဂျစ်နိုင်ငံသူကို ၂ပွဲပြတ်ဖြင့် နိုင်လိုက်တဲ့ သက်ထားသူဇာ
သက်ထားသူဇာ အိမ်ရှင် အီဂျစ်နိုင်ငံမှ ကစားမယ်အား ၂ ပွဲပြတ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိ Egypt International Series 2019 တွင် မြန်မာကြက်တောင်ကစားမယ် သက်ထားသူဇာက ဒီနေ့ မနက် (အီဂျစ်အချိန်) 9:40AM (မြန်မာအချိန်) 02:10 PM မှာ အိမ်ရှင် အီဂျစ် နိုင်ငံမှ […]
သဘောင်္င်္ရွက် ( အဖိုပင် )တွင် ရှိသော ဆေးဖက်ဝင်စွမ်းရည်
သဘောင်္င်္ရွက် ( အဖိုပင် )ဆေးဖက်ဝင် ၁ – အဆုပ်ကင်ဆာ ၊အစာအိမ်ကင်ဆာ ၊သားအိမ်ကင်ဆာ ကင်ဆာအမျိုးမျိုးကိုပျောက်ကင်းစေ ၂ – သဘောင်္အဖိုအရွက်ကိုရေစင်အောင်ဆေး. အရည်ကိုညှစ်ယူ မနက် / ည ရေနွေးကြမ်းပုံတစ်လုံးစီသောက်ပေး တစ်လကျော်သောက်လျက် ကင်ဆာရောဂါပျောက်။ ၃ – သွေးကျဲဆေးသောက်နေရသူနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူတွေကသဘောင်္ရွက်မသုံးသင့်ပါ ၄ – […]
လုပ်ငန်းလုပ်နေရင်း ငွေမဝင်သူများ/ဆိုင်တွင် အရောင်းပါးနေသူများ/ကြွေးများပေးရန်ရှိသူ ရရန်ရှိသူများ/အိမ်တွင် လာဘ်ပိတ်၍ ထွက်ငွေက ဝင်ငွေထက်များနေသူများ လှူဒါန်းသင့်သော ကုသိုလ်ပြုနည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွမ်းတော်တင်ရာတွင် အာရုဏ်ဆွမ်းကပ်လှူသည်မှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။လအလိုက် နံနက်အာရုဏ်တက်ချိန် မတူပါ။အချိူ့လများတွင် နံနက် ၄နာရီတက်ပြီး အချိူ့လများတွင် ၅နာရီမှ အာရုဏ်တက်သည်။ထို့ကြောင့် နံနက် ၅နာရီခွဲခန့်တွင် အာရုဏ်ဆွမ်းကပ်လျင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဆွမ်းတော်တင်လျင် […]
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် (ဤ ဆေးနည်း ဖြင့် ဖေါ်စပ်လျှက် ဝေဒနာရှင် များထံမှ ငွေအဆမတန် တောင်းမည့် ဆရာများ အသုံးပြုလျှင် ဤဆေးအစွမ်းမထက်ပါစေ သတည်း) (ဝေဒနာရှင် များသုံးစွဲပါက နတ်ဆေးတစ်မျှ စွမ်းပါစေသားးး) ဆေးနည်း မပြောမီ ဆေး ရဲ့ရာဇဝင် ကိုပြောပြပါရစေ။ ကင်ဆာ ကုနေတဲ့ […]
ပိုက်ဆံချေးထားပြီး ပြန်ဆပ်ဖို့ မေ့တဲ့အခါတိုင်း ဖတ်ရန်
ပိုက်ဆံချေးကြသူများ မှတ်သားရန် ၁- ပိုက်ဆံချေးမယ်ဆိုရင် ချေးမယ်လို့ပဲ ပြောလိုက်ပါ။ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စဉ်ကို ဇာတ်စုံခင်းပြမနေပါနဲ့။ ကြာပါတယ်။ မဟုတ်လည်း ချေးမှာပဲကို။ ဆိုတော့ မရှိလို့ပဲချေးချေး၊ လက်လွန်နေလို့ပဲလှည့်လှည့် ပိုက်ဆံချေးတာဟာ ချေးတာပါပဲ။ ၂- ပိုက်ဆံတစ်ရာ နှစ်ရာမှသည် တစ်သိန်း နှစ်သိန်းအထိပိုက်ဆံဟာ ပိုက်ဆံပါပဲ။ အချေးခံရတဲ့သူက ဘာမှမရှိလို့ပြန်မတောင်းရင် ဒါမှမဟုတ် […]
“ ကျနော့် အတွက် ဇိမ်ခံကားတွေ ၊ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်တွေ မလိုပါဘူး ၊ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေကို စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ခွင့်ရရင်ပဲ ကျေနပ်နေပါပြီ” #မာနေ
တစ်ခါက လီဗာပူး နည်းပြ ယာဂန် ကလော့ပ်က သူ့အနေနဲ့ အခုလို အဆင့်မျိုးအထိ ရောက်ရှိအောင် အရမ်းကို ရုန်းကန်ခဲ့တာတယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ဖူးပြီး ၊ အဲဒီလို ရုန်းကန်ခဲ့ရတာတွေဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ ဒုက္ခတွင်းကြီးထဲ ဆင်းရသလို လို့ ထင်ခဲ့မိပေမယ့် ၊ မာနေး ၊ ဆာလတ် […]
နတ်ပြည်က ပေးတဲ့ ရတနာသစ်ပင် (သစ်ပင်စိုက်မယ်ဆို ဒီအပင်ကို ဦးစားပေး စိုက်သင့်ပါတယ်)
နတ်ပြည်က ပေးတဲ့ ရတနာသစ်ပင် (သစ်ပင်စိုက်မယ်ဆို ဒီအပင်ကို ဦးစားပေး စိုက်သင့်ပါတယ်) မြေအောက်ရေ စုပ်ယူမှုများတဲ့ မလေးရှားပိတောက် တို့ ယူကလစ်ပင်တို့ စိုက်မယ့်အစား ဒီအပင်ကိုစိုက်သင့်တယ်။ Tropical Treasures မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တုန်းက ညွှန်းထားတဲ့ အပင်နောင်နှစ် နောင်နှစ်တွေမှာ ဒီလောက်မပူရအောင် အခုကတည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်သင့်ပြီ။ […]